सुरुमा ‘यात्रा’को कथा मन परेको थिएन : सलिमान बनियाँ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
बैशाख ९, २०७६ सोमबार १७:१२:१६ | उज्यालो सहकर्मी
काठमाण्डाै – अभिनेता सलिनमान बनियाँ अभिनित चलचित्र 'यात्रा' यतिबेला प्रदर्शन भइरहेको छ । 'ए मेरो हजुर-३' सँगै एकै दिन बाट प्रदर्शन शुभारम्भ गरेको यात्रालाई धेरैले 'ए मेरो हजुर ३' को चेपुवामा पर्न सक्ने अड्कल गरेका थिए ।
तर राम्रो चलचित्र दिन सके २ वटा ठूला ब्यानरका चलचित्र एकै दिनमा प्रदर्शनमा आए पनि फरक नपर्ने उदाहरण यी दुई चलचित्रले दिएका छन् । यसैबीच हामीले चलचित्र यात्राका अभिनेता सलिनमान बनियाँसँग चलचित्र र दर्शकको प्रतिकृयाका विषयमा गफगाफ गरेका छाैँ ।
‘यात्रा’मा कत्तिको जाममा पर्नु भयो ?
चलचित्र यात्रा छायांकनका क्रममा मौसमको कारणले गर्दा अलि जाममा परियो । त्यसले गर्दा हाम्रो छायांकन सम्पन्न गर्न करिब ९२ दिन लाग्यो । र अहिले परिणाम पनि राम्रो आइरहेको छ । दर्शकले चलचित्रलाई मन पराइदिनु भएको छ ।
तपाईंँले यस चलचित्रमा पनि कपाल काट्नु भएन । ‘ए मेरो हजुर-२’को जस्तै लुक्स आयो भन्ने आरोप छ नि । खास कुरा के हो ?
झट्ट हेर्दा त्यस्तो लागेको हो । तर यात्रा फिल्मको मेरो यस्तो हेयर स्टाइल ‘ए मेरो हजुर-२’को भन्दा बिल्कुलै फरक छ । अनि फिल्मको कथाले मागेको कारण पनि कपाल पाल्नुपरेकोे हो ।
यस चलचित्रको लागि द्वन्द्व प्याकेजहरु पनि सिक्नुभयो ?
मैले लगभग दुई-तीन महिना नै सिकेको थिए । सुरु सुरुमा त निकै गाह्रो पनि भयो । तर सबै भन्दा ठूलो कुरा आत्मविश्वास हो । मसँग आत्मविश्वास थियो, त्यसैले आज म सफल भएको हुँ ।
यस फिल्मको के कुरा मन परेर फिल्ममा साइन गर्नुभयो ?
सुरुमा कथा सुन्दा त मलाई त्यति मन परेको थिएन र म गर्दिन भन्ने निर्णय गरेको थिएँ । उहाँहरुले मेरै लागि भनेर कथाका केहि अंश परिमार्जन गर्नु भएछ । त्यही फिल्मको लागि फेरि मलाई अफर आयो । त्यतिबेला चै मलाई कथा पहिलाको भन्दा राम्रो लाग्यो र चलचित्रमा काम गर्न राजि भएँ ।
नयाँ नायिका मलिका महतसँग काम गर्दा कस्तो लाग्यो त ?
हामीले सोचेको भन्दा एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ । र त्यही अनुसार उहाँको अभिनयलाई दर्शकले पनि रुचाउनु भएको छ ।
चलचित्र प्रदर्शन भइसकेको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउँदै हुनुहन्छ ?
दर्शकबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । हाम्रो फिल्मको गीत र ट्रेलरलाई जसरी रुचाउनु भएको थियो चलचित्रलाई पनि उत्तिकै माया गर्नुभएको छ । सबै दर्शकलाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु । यात्रा हेर्नुभएको छैन भने हेर्न आग्रह गर्छु।
आफ्नो दोस्रो चलचित्र यात्रापछिको तपाईँको योजना के छ ?
चलचित्र अझै पनि हलमा लागिरहेको छ । त्यसैले अहिले म यात्रा कै लागि मात्र सोचिरहेको छु । सायद अब केही समय आराम गर्छु । त्यसपछि चित्तबुझ्दो कथाको लागि अफर आयो भने काम गर्नेछु ।